Thunderstruck द्वितीय | Mobile Deposit Slots Site | CoinFalls अनलाइन क्यासिनो
Thunderstruck द्वितीय को नर्स पौराणिक कथा आधारित स्लट खेल हो र Microgaming विकास छ. यो खेलको पूर्ववर्ती – Thunderstruck, सबै भन्दा लोकप्रिय स्लट को एक कहिल्यै सिर्जना गरेका छ गरिएको. Microgaming यो sequel तरिका को एक एकदम धेरै मा सुधार गर्दा मूल खेल को सार धेरै कायम रहन्छ. The Great Hall of spins bonus round and wildstorm feature are both exciting and will keep the player on their toes. तपाईंले यो खेल मा खेल्न सक्छन् मोबाइल जम्मा स्लट साइट.
Microgaming isaslot game developing company based out of the Isle of Man in the British Isles. यो भन्दा ठूलो स्लट खेल को मार्फत बेलायत मार्फत क्यासिनो गर्न प्रदायक र सम्बन्धित प्रविधि 20,000 हाल संचालन मा मिसिन. तिनीहरूलाई एक धेरै मोबाइल जम्मा स्लट साइट मा उपलब्ध.
Thunderstruck द्वितीय छ कि एक अनलाइन भिडियो स्लट छ5रील र 243 paylines. मोबाइल जम्मा स्लट साइट मा प्ले. यो स्लट प्रति स्पिन धेरै 15 रूपमा £ लागि प्ले गर्न सकिँदैन. खेल यही नामको क्लासिक र धेरै मनोरंजक तुलना अपेक्षाकृत कम अस्थिर छ. यो नर्स पौराणिक विषय तरिकाले यसरी यो खेल एक दृश्य उपचार बनाउन ग्राफिक्स मा शामिल गरिएको छ.
जहाँसम्म खेल प्ले मानिन्छ रूपमा, यो सबै भन्दा अन्य स्लट मा जस्तै बोनस खेल बारे बस छैन. आधार खेल सानो जीत को धेरै एकदम प्राय आगामी संग पर्याप्त रोचक छ. 1000x को एक मिनी Jackpot आधार खेलमा विजयी हुन पनि हो.
त्यसपछि अनियमित रूपबाट जो Wildstorm सुविधा छ. यहाँ तपाईँले एक मुक्त स्पिन प्राप्त तर यो बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग त्यहाँ सबै पाँच रील एक जीत लैंडिंग जंगली आफ्नो संभावना यसरी वृद्धि बारी एक मौका छ कि छ.
Spins को महान् हल सबै भन्दा राम्रो सुविधा छ. त्यहाँ छन्4यो र यो सुविधा विभिन्न स्तर अवतरण द्वारा रूपबाट3को रील मा स्क्याटर प्रतीक वा थप. तपाईं बीच हुन सक्छ 10 गर्न 25 तपाईंलाई छन् स्तर निर्भर गर्दछ बोनस साथ निःशुल्क spins.
एक जंगली प्रतीक जो स्क्याटर बाहेक अन्य सबै प्रतीक को प्रतिस्थापन को रूप कार्य पनि छ.
त्यसैले, प्राप्त एक मोबाइल जम्मा स्लट साइट मा सुरु.
यो यसको पूर्ववर्ती एक धेरै लोकप्रिय स्लट खेल भएको छ जस्तै. खेल वालेट मा सस्तो छ तर एकै समयमा साँच्चै राम्रो तरिकाले दिन्छिन्. यो यस स्लट सायद किन यति धेरै fanfare छ छ. मोबाइल जम्मा स्लट साइटमा प्राप्त र कताई सुरु.